tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-21
Tamin'ny 16 Jona, Beijing dia nanao andiana valandresaka ho an'ny mpanao gazety hankalazana ny faha-100 taonan'ny niorenan'ny Antoko Kaominista China, "Beijing Promote Comprehensively". Nandritra ny fivoriana, Kang Sen, lefitry ny sekretera lefitry ny komitin'ny fambolena sy ny asa any Beijing, talen'ny talen'ny t ...
Ahoana ny fomba hisafidianana kettle elektrika?
Ny kettle elektrika dia matetika ampiasaina amin'ny fiainantsika, anisan'izany ny ao an-trano na amin'ny hotely. Rehefa mila rano mafana isika, dia afaka manome izay ilaintsika ny kettle elektrika, saingy misy ketrika elektrika tsy manara-penitra mety hitondra fahavoazana amintsika, koa manoloana ireo vokatra ketrika elektrika isan-karazany eny an-tsena, inona no tokony hataontsika? ...
Ahoana ny fampiasana tsara ny lanjan'ny elektronika vera CW275
Glass Electronic Weight Scale CW275 dia refesin'ny lanjany avo lenta miaraka amin'ny sensor 4 marefo marefo, izay afaka mandrefy ny lanjanao bebe kokoa, saingy tsy maintsy mitandrina tsara ianao raha hampiasa tsara, raha tsy izany dia hitongilana ny lanjany ary hisy fiantraikany amin'ny fandrefesana. Ka ahoana ny fampiasana Glass Electronic Weight S ...
Ny fahatongavan'ny vidin-javatra ambany amin'ny fampiasam-bola amin'ny hotely amin'ny valan'aretina dia tsy tonga
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-15
Betsaka amin'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny lehibe manerantany no tsy nahomby tamin'ny famitana ny krizy tamin'ny valanaretina. Saingy mbola te hampiroborobo ny hevitra izy ireo fa sarobidy kokoa amin'ny tambajotra eran-tany noho ny maha mpandraharaha tsy miankina azy ireo. Mila manaiky an'io fotokevitra io ny mpandraharaha madinidinika mba hisamborana ny opportu ...
Ahoana no ahazoan'ny mpanamboatra antoka fa azo antoka ny fanamainana volo
Ny hevitra fototra ao ambadiky ny fanamainana volo dia tsotra fotsiny, fa ny famokarana iray ho an'ny fanjifana betsaka dia mitaky fieritreretana mafy momba ny endrika fiarovana. Ireo mpanamboatra volo dia mila maminavina ny fomba mety hampiasan'ny mpanamory volo azy ireo amin'ny fomba diso. Avy eo izy ireo dia manandrana mamolavola vokatra izay azo antoka amin'ny karazany midadasika o ...
Hotely Bulgarian amin'ny maody COVID-19: Ahoana ny fampiharana azy ireo
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-09
Taorian'ny fotoana lava nisian'ny tsy fahatokisana maharary sy tahotra be, ny lavaka ao Bulgaria dia vonona handray ny onjan'ny mpizahatany amin'izao vanim-potoana izao. Ny fitandremana mifandraika amin'ny areti-mandringana eo amin'ny toerany dia nanjary iray amin'ireo lohahevitra be mpiresaka indrindra momba ny resaka Bulgaria. Ireo ...